China Micro fiber ịwụ okpu emepụta na suppliers | Wangjie
Micro fiber ịwụ okpu
1.matiri: Micro eriri
Hdị okpu: iche dị iche iche gburugburu na n'okpuru nku
3. Size: Agba okenye (58cm)
4. Agba: Agba niile dị
5: Logo: ngwaahia logo
6. Mbukota: 12pcs / polybag, 60pcs / n'ime igbe, 120pcs / katọn
7. Carton size ： 65 * 45 * 38CM
Nkọwa maka Chepụta onwe gị ịwụ okpu omenala kpara akpa ịwụ okpu
- Uwe okpu niile di na webụsaịtị enwere ike ịhazi aha ya n’ime ebe obibi, ibi akwụkwọ, akara, wdg
- Kpoo okpu niile egosiri na weebụsaịtị wepụtara nke ọma
Oge 1, na Onye Ahịa Kasị Elu bụ ntuziaka anyị iji nyefee ezigbo onye na-eweta ọrụ maka atụmanya anyị. N'oge a, anyị na-achọ ihe kachasị mma anyị ga-abụ n'ezie otu n'ime ndị na-ebugharị mbubata kachasị mma na ọzụzụ anyị iji zute ndị na-azụ ahịa chọrọ karịa maka ndị ọkachamara China China High Quality Custom Egwuregwu Sports Cap Dry Fit Running Hat Black Micro Fiber Hats, uru ndị ahịa na afọ ojuju bụkarịkarị ebumnuche anyị. Jide n'aka na ị kpọrọ anyị. Nye anyi ohere, nye gi ihe ijuanya.
Ọkachamara China China Cap na baseball Cap price, "Mee ka ụmụ nwanyị mara mma" bụ echiche amamihe anyị. "N'ịbụ ndị ahịa 'tụkwasịrị obi na họọrọ ika soplaya" bụ ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ anyị. Anyị na-agbasi mbọ ike n'akụkụ ọ bụla ọrụ anyị. Anyị ji obi anyị na-anabata ndị enyi kpakorita azụmahịa na-amalite imekọ ihe ọnụ. Anyị na-atụ anya isonye aka na ndị enyi na ụlọ ọrụ dị iche iche iji mepụta ọdịnihu magburu onwe ya.
Na-agbaso nkwekọrịta ahụ ”, kwekọrọ na ihe achọrọ n'ahịa, na-esonye n'ahịa asọmpi site na mma ya dị ka nke na-enye ọtụtụ ụlọ ọrụ zuru oke na nnukwu ụlọ ọrụ maka ndị na-azụ ihe ka ha wee ghọọ nnukwu mmeri. Nchụso nke ụlọ ọrụ ahụ, ga-abụ afọ ojuju nke ndị ahịa maka OEM / ODM Supplier China High Quality Custom Sports Cap Dry Fit Running Hat Black Micro Fiber Hats, Nlebara anya pụrụ iche na nkwakọ ngwaahịa ahịa iji zere mmebi ọ bụla n'oge njem, Nkọwa zuru ezu na nzaghachi bara uru na ndụmọdụ nke ndị ahịa anyị a ma ama.
OEM / ODM Supplier China Cap na Baseball Cap price, Anyị na-ezube-aghọ oge a na enterprise na azụmahịa ezigbo nke "Ezi obi na obi ike" na na ebumnuche nke "Inye ndị ahịa ndị kasị ji ezi obi na ọrụ na nke kacha mma mma ngwaahịa". Anyị ji obi anyị niile na-arịọ maka nkwado gị na-agbanweghi agbanwe ma na-enwe ekele maka ndụmọdụ na ntụzịaka gị.
Anyị enwetala ndị ọrụ aka anyị, ndị okike na otu ndị otu, ndị ọrụ aka ọrụ, ndị ọrụ QC na ndị ọrụ ngwugwu. Anyị nwere usoro nlezianya dị mma maka usoro ọ bụla. Ọzọkwa, ndị ọrụ anyị niile nwere ahụmịhe isiokwu maka nnyefe ngwa ngwa China High Quality Custom Sports Cap Dry Fit Running Hat Black Micro Fiber Hats, Should kwesịrị ị na-achụ nta maka ogo dị elu, nnyefe ọsọ ọsọ, nke kachasị mma mgbe ịnyechara ya na nnukwu ndị na-ebu ngwaahịa. na China maka mmekọrịta ụlọ ọrụ ogologo oge, anyị ga-abụ nhọrọ kachasị dị irè gị.
Nke gara aga: nwa ịwụ okpu
Osote: reversible kpara okpu
3d ịwụ okpu
Ysmụaka ịwụ okpu
Mụ nwanyị ịwụ ịwụ
Okpu ala ịwụ
Corduroy ịwụ okpu
Okpu ịwụ Denim
Mụaka ịwụ okpu
Bumụaka ịwụ okpu
Okpu Ukpa nwoke
Soft ịwụ okpu
Owu Fisherman Bucket Hat / Cap
Ugboro abụọ n'akụkụ Unisex N'èzí Cap inyom Sunscreen ...
owu ịkpa okpu
nwa ịwụ okpu